निर्वाचनको केन्द्रविन्दुमा शीर्ष नेता
देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्र समान महत्वका हुँदाहुँदै पनि केही खास क्षेत्रहरू पनि छन्, जहाँबाट उम्मेदवारी दिएका शीर्ष नेताको पराजयले पार्टीहरूको शक्ति–सन्तुलन मात्र नभई सिंगो मुलुकको राजनीतिमा फेरबदल ल्याउन सक्छ ।
काठमाडौं क्षेत्र नं. २ का एमाले उम्मेदवार माधवकुमार नेपाल । तस्वीर: नागरिक
रोल्पाको सुलिचौरमा भएको कांग्रेसको चुनावी र्‍याली । तस्वीरः जीवन डाँगी
दाहालले मतपत्र प्रकरणको भने उच्चारणसम्म गरेका छैनन् । त्यस प्रकरणबाट पीडित देवी ज्ञवाली र दाहाल सँगसँगै देखिए पनि मतदाताको मन माझ्नि नसकेको एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् । एमालेले माडी क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्यमा आफ्नो उम्मेदवार मागेको थियो । तर, वाम गठबन्धनबाट माओवादीका रामलाल महतोलाई उम्मेदवार बनाइएपछि एमालेका कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
एमालेका एकजना चितवन जिल्ला सदस्य गठबन्धन भए पनि एमालेको दुईहजारदेखि तीन हजार भोट दाहाललाई नजाने बताउँछन् । मतपत्र प्रकरणकै कारण कांग्रेस समर्थकको धेरै भोट राप्रपा (प्र) का पाण्डेले पाउने देखिन्छ । सांगठनिक आधार कमजोर भए पनि कांग्रेसको समर्थन, २०७० को निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनु जस्ता कारणले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
नुवाकोट क्षेत्र नं १ का कांग्रेस उम्मेदवार डा. रामशरण महत । तस्वीरः नवदीप श्रेष्ठ
अर्कातिर, स्थानीय तह निर्वाचनका वेला चर्किएको कांग्रेसको डडेल्धुरा जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल र पूर्वसभापति रघुवर भट्ट समूहको विवाद साम्य भइसकेको छैन । दुवै समूह एकअर्कालाई असहयोग नै गरिरहेका छन् । मल्लले स्थानीय तहमा आफ्नो समूहकालाई टिकट नदिएको भन्दै डडेल्धुरा सदरमुकाममा देउवा विरुद्ध जुलूस नै निकालेका थिए । त्यसवेला सदरमुकामकै अमरगढी नगरपालिकामा कांग्रेस हारेको थियो । कांग्रेस नेता–कार्यकर्तामा त्यसको तूष बाँकी नै छ ।
डडेल्धुरा ‘क’ मा प्रदेश सभा उम्मेदवार भट्टको चुनावी प्रचारमा मल्ल समूह सहभागी हुने गरेका छैनन् । त्यस्तै, डडेल्धुरा ‘ख’ का उम्मेदवार मल्लको चुनावी अभियानमा भट्ट समूहका नेता–कार्यकर्ता सहभागी भइरहेका छैनन् । यसको असर प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार प्रधानमन्त्री देउवालाई पर्ने अनुमान छ । “प्रदेशमा यसै भन्न सकिन्न” कांग्रेसका एकजना जिल्ला नेता भन्छन्, “प्रतिनिधिसभामा देउवाले जित्छन्, तर पहिले जस्तो सजिलो छैन ।”
प्रधानमन्त्री भएका वेला भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा लिएको अडानका कारण पनि यसपटक झपा क्षेत्र नं. ५ मा ओली बलियो मानिएका छन् । राज्यपुनर्संरचनादेखि संविधान जारी गर्ने वेलामा देखाएको अडानले पनि ओलीलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ । आफ्नै पार्टीको मजबूत मत र माओवादीसँगको गठबन्धनले उनलाई थप सुरक्षित बनाएको स्थानीय एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
ओलीको पहलमा पश्चिम झापामा विकास योजनाहरू शुरू भएका छन् । दमकमा बौद्धबिहार, हरित औद्योगिक क्षेत्र जस्ता योजना कार्यान्वयन र जितेमा प्रधानमन्त्री हुने अवस्थाले पनि ओलीको पक्षमा जनमत आउने एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल २०७० को संविधानसभामा काठमाडौं र रौतहटबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछिको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेसका कुईंकेलले बाजी मारेका थिए । आफ्नो उम्मेदवार नउठाएको राप्रपाको भोट कुईंकेलले पाउने आकलन छ । तर, माओवादीसँग गठबन्धन र राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेतालाई जिताउँदा विकास निर्माणका काम हुने मतदाताको बुझइका कारण नेपाल नै बलिया उम्मेदवार मानिएका छन् ।
सप्तरी क्षेत्र नं २ का संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार उपेन्द्र यादव । तस्वीरः श्रवण देव
त्यस्तै, सर्लाही छोडेर महोत्तरी–३ बाट उम्मेदवारी दिएका राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरलाई पनि वागीले समस्यामा पारेका छन् । उनी विरुद्ध चन्देश्वर झाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । झा साविकको महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ बाट २०७० मा संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । राजपाले टिकट नदिएपछि बागी उठेका उनको अवस्था मजबूत हुँदै गएको देखिएको छ । वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार रहेका एमालेका विजयकुमार चौधरी पनि कमजोर मानिंदैनन् । उनलाई माओवादीले पनि साथ दिएको छ ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा ७८ हजार ९०४ मत रहेको यो क्षेत्रका प्रमुख पदहरूमा राजपा विजयी भएको थियो । विगतको नतिजा र कांग्रेसको समर्थनले गर्दा ठाकुरको अवस्था मजबूत नै मानिए पनि केन्द्रको निर्देशनमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका कांग्रेस कार्यकर्ता कता ढल्कन्छन् भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ ।
कतै वागी, कतै बाहुबलीको बोलवाला रहेको यो निर्वाचनमा बौद्धिक छविका नेताहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । जस्तो, कांग्रेस नेता गगन थापा र एमाले नेता राजन भट्टराई उम्मेदवार रहेको काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ लाई बौद्धिकहरूको प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेसका प्रखर वक्ता थापा यो क्षेत्रबाट २०७० सालको संविधानसभामा निर्वाचित भएका थिए । वैदेशिक मामिलाविज्ञ भट्टराई पनि यो क्षेत्रका मतदातामा जाँच्न लागिपरेका छन् ।
झापा क्षेत्र नं. १ मा वाम गठबन्धनबाट उठेका राम कार्की र कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माबीचको प्रतिस्पर्धालाई त्यही रूपमा हेरिएको छ । झापामा खासै राजनीतिक लगानी नभएका माक्र्सवादी दर्शनमा दक्खल राख्ने कार्कीलाई विपक्षीहरूले ‘पर्यटक उम्मेदवार’ भनी प्रचार गरेका छन् । वाम गठबन्धनका एकजना सूत्रधार मानिएका कार्की भने यसलाई अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार आरोप भनिरहेका छन् ।
२२ कात्तिकमा झापाको काकडभिट्टामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आजको युगमा व्यक्तिको जन्म र बसोबासको ठेगानालाई मात्र आधार मानेर राजनीति सम्भव नहुने बताए । लाखौं युवा विदेशिएको मुलुकमा गरिखान आफ्नो जन्म ठेगाना छोड्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने कार्कीले आग्रह गरे ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका रविन कोइरालासँग पराजित भएको यो क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका कम परिचित उम्मेदवारका कारण यसपालि शर्माको जित सुरक्षित भएको कांग्रेसको दाबी छ । झापा जत्तिको सचेत ठाउँका मतदाताले विवेक प्रयोग गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको शर्मा बताउँछन् । “मतदाता चलायमान हुनु राम्रो हो” शर्मा भन्छन्, “जनतालाई कसैले गढ वा किल्ला ठान्छन् भने त्यो सरासर गलत हो ।”
शान्ति प्रक्रियामा उल्लेख्य भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई झापा क्षेत्र नं. ३ मा हिन्दू राष्ट्रका पक्षपाती राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले चुनौती दिएका छन् । बहालवाला गृहमन्त्री भएकै वेला २०६४ मा माओेवादीकी धर्मशिला चापागाईसँग पराजित भएका सिटौलाले २०७० मा भने लिङ्देन र चापागाई दुवैलाई हराएका थिए । आफ्नो उम्मेदवार नउठाएको वाम गठबन्धनको भोट कता जान्छ भन्नेमा सिटौलाको जित निर्भर हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिचान बनाएका जुनसुकै दलका नेता पराजित हुँदा सम्बन्धित दल र मुलुककै राजनीतिमा प्रभाव पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । एउटै व्यक्तिको जितहारबाट विभिन्न सन्देश प्रवाह हुने उनीहरूको भनाइ छ । जस्तो, चितवनबाट पुष्पकमल दाहाल पराजित हुँदा वाम गठबन्धनमा असर पुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, झापामा कृष्णप्रसाद सिटौला पराजित हुँदा पुरातनवादीले जितेको सन्देश जाने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवारले एउटा पनि सिट नजित्दा नेपालमा वैकल्पिक पार्टीका लागि वातावरण तयार भएको रहेनछ भनेर बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा रोल्पामा कांग्रेस र एमाले नजिक थिए भने माओवादी एक्लै । वाम गठबन्धन बनेपछि भने कांग्रेस एक्लिएको छ । यो समीकरणको असर दुई वाम दलमै पनि देखिएको छ । एमाले, माओवादीसँगै चुनावी प्रचारमा जाँदा अचम्म परेको सुकिदहका रैलबहादुर डाँगी बताउँछन् । उनी २०५४ सालमा एमालेबाट साविक जिनाबाङ गाविस– ९ का वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
मत माग्दै माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वर्षमान पुन । तस्वीरः जीवन डाँगी
कम्युनिष्ट एकताको कुरा राम्रो भए पनि माओवादी खराब पार्टी भएकाले जुनसुकै वेला एमालेलाई धोका दिन सक्ने डाँगीको बुझाइ छ । “अस्ति लडेकाहरू अहिलेको चुनावमा एउटै गाडीमा देखिए” उनी भन्छन्, “आखिर लड्ने भनेको हामी रहेछौं, नेताहरू त मिलिजाँदा रहेछन् ।”
स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच भएका झडपहरूको समीक्षा र मेलमिलाप गर्ने निर्णय गरेको दुई पार्टीले जनाएका छन् । माओवादी कार्यकर्ताले एमाले कार्यकर्ता कुटेको विषय टुंगो नलगाई पार्टीका नेताहरू संयुक्त प्रचारमा लागेकोमा केही सदस्यहरूले एमालेको जिल्ला कमिटी बैठकमा नेताहरूको कडा आलोचना गरेका थिए ।
पहिले कुटाइ खाएका एमाले कार्यकर्ताले कसरी माओवादीकै पक्षमा भोट माग्न सक्छन् भन्ने उनीहरूको गुनासो थियो । माओवादी जिल्ला नेतृत्व पनि आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्र्ने अवस्थामा पुगेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
रोल्पाका हार्जङवासी दुई दशक पहिलेको एउटा घटना सम्झेर अझै झस्किन्छन् । त्यतिवेला राति माओवादीले घरको भित्तामा नारा लेखेर जाने र दिउँसो सेना आएर किन लेख्न दिइस् भनेर सर्वसाधारणमाथि हातपात गर्नु सामान्य जस्तै थियो । सेनाको दुव्र्यवहारबाट जोगिन गाउँलेहरूले नारा मेटाउन थाल्दा माओवादीले किन मेटाइस् भनेर वृद्ध–वृद्धा, बालबालिका, महिला सबैमाथि कुटपीट गर्थे । त्यसपछि हार्जङवासीले समिति नै बनाएर नारा मेटाउने निर्णय गरे ।
नारा मेट्ने समिति र लेख्न आएकाहरूबीच राति झडप हुँदा चारजना माओवादीको ज्यान गयो । त्यसपछि माओवादीले २७ फागुन २०५५ मा हार्जङका ९ जनालाई जिउँदै आगो लगाएर मारे । सामूहिक हत्या गरिएका तीमध्ये एक जना मात्रै नारा मेटाउने समितिका सदस्य रहेको हार्जङका एमाले कार्यकर्ता मनप्रसाद पुन बताउँछन् । सर्वसाधारण गाउँलेहरूको त्यो बीभत्स हत्यामा गाउँकै माओवादी संलग्न थिए । अधिकांश पीडित परिवार एमाले समर्थित थिए ।
त्यस्तै, नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गराउने, साना जलविद्युत् आयोजनामा सहयोग जुटाउने, जिल्लाका सबै ठाउँमा टेलिफोन विस्तार गर्ने, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बाचा पनि आश्वासनमै सीमित भयो । १५ शैय्याको जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा स्तरोन्नति त भयो, तर सेवा प्रवाहको अवस्थामा सुधार आएन । भौतिक पूर्वाधार नहुँदा विशेषज्ञ सेवा शुरु हुनसकेको छैन । दियालो र मैनबत्तीका भरमा रहेको जिल्लाका गाउँहरूमा भएका टेलिफोनले काम गर्दैनन् ।
साथमा बच्चु विक डडेलधुरा, लक्ष्मण केसी रुकुम, युवराज श्रेष्ठ कास्की, नवदीप श्रेष्ठ नुवाकोट, शर्मिला बुढाथोकी दोलखा, रञ्जन भण्डारी माली महोत्तरी, श्रवण देव सप्तरी, गोपाल गडतौला झापा र लक्ष्मी गौतम पाँचथर ।